Malunga nathi - Ubulumko bentsimbi edibeneyo, Ltd.
I-Alucosun, uphawu olutsha kwimarike yePaneli yeAluminiyam! Iqela lethu linamava angaphezu kweminyaka engama-20 kwi-Aluminium Composite Panel Industry, ukusuka kwiMveliso ukuya kuPhuhliso lweMveliso. Ngoku sikulungele ukuba ngumkhokeli ophambili wehlabathi kunye netekhnoloji yamva nje kunye nomthengi ogqwesileyo wokukhathalelwa kunye nenkxaso.
Ukusukela kwasekuqaleni, i-Alucosun igcine amehlo evulekileyo kulo lonke uhambo, ukusuka ekwamkelweni kwemveliso eluhlaza ukuya kwimveliso yokugqibela. Yonke imiba kuyilo ekwenziweni izalisekiswa yinkqubo yolawulo lomgangatho- eyakhiwe ngokugqibeleleyo ngabahloli abaziingcali kunye nezixhobo zelebhu eziphambili, eqinisekisa ukuba zonke iimveliso ziyahambelana nemigangatho yamazwe aphesheya: iYurophu yaseJamani iDIN, iCommonwealth UK BS, iAmerican ASTM, Middle East kunye njalo njalo.
Iqela le-Alucosun lizimisele ukuxhasa abathengi bethu ngokubonelela ngexesha lokuhanjiswa kweemveliso ezithembakeleyo kunye neenkonzo zexabiso elikhethekileyo. Zonke ezi zinto zinokukunceda ekufumaneni inzuzo yokukhuphisana kwintengiso yakho. Sijonge ukugcina umbono wethu kunye nomsebenzi wethu ngokuhlala sifuna ukuphuculwa kunye nophuhliso ngemfundo eqhubekayo kunye nokufunda. Sijonge ukuphuhlisa itekhnoloji entsha kunye neendlela ezilungileyo zeshishini. Ukugcina uzinzo ngokupheleleyo, abasebenzi bethu bayazingca, kwaye sizimisele ukubonelela ngendawo emnandi, yokukhulisa nokukhulisa indawo ekhuthaza abasebenzi bethu ukuba bavelise kakhulu kwaye bakhule ngokobuqu nangobungcali.
sabelana ngenkolo efanayo ukuba ayisiyiyo kuphela ukufaneleka, kodwa kunye nesimo sengqondo sinokumisela ikamva lethu.
Yiza ukusebenzisana nathi kwaye usenze iqabane elithembekileyo elinye nelinye!
I-Alucosun ixhotywe nge-coating ezimbini kunye neelayini ezintlanu zemveliso ye-lamination (umgca ogqithileyo we-2000mm-ububanzi ubandakanyiwe). Ngamava angaphezulu kweminyaka engama-20 i-Alucosun isasazeke amaphiko ayo kwihlabathi liphela ngokubonelela abathengi bayo ngeemveliso ezizinzileyo nezisemgangathweni.
1) Iinkcukacha zezixhobo:
Oomatshini bokubhijela nokubuyisela umva 3 iiseti
Imigca yokucoca amachiza 2 iiseti
Imigca yokuDibanisa isantya 2 iiseti
Imigca yokuBumba 5 iiseti
2) amandla emveliso / Unyaka:
Iiphaneli zeAluminiyam ezidityanisiweyo 7.6 yezigidi / sqm
Iiphaneli zeAluminiyam zeLattic Isigidi esi-1 / sqm
Aluminium Camera ohlobo Iitoni ezili-18500